Hamiga Shiinaha iyo Warshada Qalabka Gudbinaysa oofwareenka
Warshada Daqiiqda galleyda
Mashruuca Isku darka Daqiiqda
Qalabka Nadiifinta Hadhuudhka
Qalabka Nadiifinta Abuurka
Qalabka Gaadhida Makaanikada
Hamiga iyo Qalabka gudbinta oofwareenka
Baakadaha budada ah
Taxanaha TQSF Burburiyaha Cufisjiidka
TCRS Taxanaha Wareegtada
Roller Mill koronto
Daqiiqda Mashiinnada Pulse Jet Filter
Shaandheeyaha garaaca garaaca garaaca burka ee si weyn loogu isticmaalo warshadaha Cuntada, Hadhuudhka iyo Quudinta.Sidoo kale loo isticmaalo Kiimikada, Caafimaadka iyo warshadaha kale.
Qalab-shiidka Daqiiqda Laba Wayn
Mashiinka loogu talagalay beddelka jihada gudbinta walxaha ee nidaamka gudbinta pneumatic. Si ballaaran loo isticmaalo khadka gudbinta pneumatic ee burka, mashiinka quudinta, bariiska iyo wixii la mid ah.
Mashiinnada iyo dunta dunta ayaa loo soo saaray sidii gabal aan sax ahayn.Xididdada afuufaya waxay leedahay nolol adeeg oo dheer waxayna si joogto ah u socon kartaa.
Sida PD (barakaca togan) afuufiyaha, waxay la timaadaa saamiga isticmaalka mugga sare iyo waxtarka mugga sare.
Hawo-qaade koronto oo hufan ahaan, taageereheenna centrifugal waxaa lagu sameeyay imtixaan dheellitiran oo firfircoon.Waxay ka kooban tahay buuq yar oo shaqeynaya iyo dayactir fudud.Hufnaanta iyo heerka dhawaaqa gaarka ah ee A-miisaanka leh labaduba waa ilaa heerka darajada A ee lagu nidaamiyay heerarka qaranka Shiinaha ee la xidhiidha.
Qufulka Hawada Cadaadis Xun
Naqshadaynta horumarsan iyo samaynta wanaagsan ee qufulka hawada ayaa xaqiijiyay in hawadu si ku filan u adkeyso halka giraangiraha wareega uu si habsami leh u socdo.
Muraayadaha aragga ayaa laga heli karaa meesha laga soo galo hawada hawada cadaadiska taban si loo eego kormeerka tooska ah.
Qufulka Hawada Cadaadis Wanaagsan
Walaxda ayaa ka soo gasha meesha ugu sareysa, waxayna sii dhex martaa impeller-ka, ka dibna waxaa laga sii daayaa meesha hoose.Waxay caadi ahaan ku habboon tahay in lagu quudiyo walxaha dhuunta cadaadiska togan, cadaadiska hawada ee wanaagsan ayaa laga heli karaa warshadda daqiiqda.
Marwaxada cadaadiska sare ahi waxa ay siisaa awood ay ku qaado dhammaan noocyada agabka dhexe ee ka imanaya mishiinnada rullaluistuyada, sifayaasha ama dhamaystirayaasha biraha ilaa qorshayaasha shaandhaynta iyo kala soocidda dheeraadka ah.Qalabka waxaa lagu wareejiyaa tuubooyinka pneumatic.
Cinwaanka: Poliu Quliang Warshadaha Degmada Xinmi
Telefoon: +86 13633846327
Sheybaarka Wheat Mill
Warshada sarreenka shaybaadhka waxay u dhigantaa warshadda burka yar.Waxa u dheer diyaarinta tijaabada...
Miisaanka wax soo saarka ee miraha burka ayaa ka duwan, ka dibna habka isku darka daqiiqda sidoo kale waa mid yar ...
Raritaanka macaamiisha Indonesian
Macaamiisha Indooniisiya waxay soo iibsadeen weel-qaade, makiinado, iyo dhululubo loogu talagalay warshadda daqiiqda e...
Qalabka daqiiqda waxa uu ku xidhaa makiinada daqiiqda
© Xuquuqda daabacaadda 20102021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.>